/ ngwaahịa / Mmekọahụ Mmebi Hormones / Ethynyl estradiol (57-63-6)
Rating: SKU: 57-63-6. Category: Mmekọahụ Mmebi Hormones
Ezigbo estradiol (57-63-6) S.pecification:
Standand: CP, EP, USP, IP
nchekwa: Akọrọ, ọchịchịrị na 0 - 4 C maka obere oge (ụbọchị ruo izu)
Ethinyl Estradiol ntụ ntụ bụ estrogen semisynthetic. Usoro ọrụ nke ethinyl estradiol dị ka Estrogen Receptor Agonist. Ọ nwere ikike nke estrogenic dị elu mgbe a na-eji ọnụ ekwu okwu, a na-ejikarị ya dị ka akụkụ estrogenic na ọgwụ mgbochi ọnụ. Ethinyl estradiol na-ejikọta na estrogen receptor dị mgbagwoju anya ma banye n'ime oghere ahụ, na-eme ka ntụgharị DNA nke mkpụrụ ndụ ihe nketa metụtara mmeghachi nke cellular estrogenic. Onye ọrụ a na-egbochi 5-alpha reductase na anụ ahụ epididymal, nke na-ebelata ogo testosterone ma nwee ike igbu oge ọganihu nke ọrịa kansa. Na mgbakwunye na mmetụta antineoplastic ya, ethinyl estradiol na-echebe megide osteoporosis. Na ụdị anụmanụ, usoro egosiputa obere oge na onye ọrụ a egosila na ọ ga-enye nchebe ogologo oge megide ọrịa kansa, na-eickingomi mmetụta antitumor nke afọ ime.